42% dadka Ingriiska ah ayaa ku fikiraya inay fasax ku tagaan Sucuudiga
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » 42% dadka Ingriiska ah ayaa ku fikiraya inay fasax ku tagaan Sucuudiga
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirarka • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Sacuudi Carabiya ayaa ku guuleysatey ololaha dalxiiska gudaha sanadka 2020, waxaana la filayaa in tirada dadka soo booqda ay sii korodho iyadoo dhowaan dib loo bilaabay safarrada caalamiga ah.
Dalxiiska Sucuudiga ee kobcaya ayaa qarka u saaran inuu ku soo laabto wadadii uu ku gaari lahaa yoolkiisa hamiga ah, iyadoo 10kii qof ee British ah afar ka mid ah ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan fasaxa Boqortooyada, ayaa daaha ka qaaday cilmi baaris ay maanta (Isniin 1 November) soo saartay WTM London.
Meeshu waxay arki doontaa kobcinta qorshaheeda usbuucan iyadoo shirkado badan oo safar ah ay sheegeen inay u badan tahay inay heshiisyo ganacsi la saxiixdaan shirkadaha Saudi Arabia ee WTM London, kaasoo bilaabmaya maanta oo socon doona ilaa Arbacada 3 November.
Aragtida rajada leh waxay ka timid natiijooyinka laba ra'yi-uruurin WTM London, mid lagu sameeyay macaamiisha Ingiriiska iyo kan kale ee leh xirfadlayaasha ganacsiga socdaalka ee caalamiga ah, kaas oo ka kooban Warbixinta Warshadaha WTM.
Codbixinta 1,000 macaamiisha ah ayaa lagu ogaaday in 42% dadka waaweyn ee UK ay ku fikiri doonaan inay fasax ku tagaan Sacuudi Carabiya. 19% kale ayaa sheegay in aysan dhici doonin balse la qancin karo.
Ra'yi ururin 676 xirfadlayaal ganacsi ah oo ka kala yimid waddamada adduunka ayaa lagu ogaaday in kala badh in ka badan (51%) ay qorshaynayaan inay wada hadal ganacsi la yeeshaan shirkadaha Sucuudiga ee WTM London toddobaadkan.
Waxay ahayd meesha ugu badan ee laga soo xigtay, iyada oo ka horeysa Talyaaniga oo ku jira kaalinta labaad (48%) iyo Greece (38%).
Jawaab bixiyaasha ganacsiga ayaa sidoo kale sheegay inay u badan tahay inay qandaraasyo la saxiixdaan shirkado ka socda Sacuudi Carabiya, iyadoo waddanku uu keenay 3.9 shantii - mar labaad, suurtagalnimada ugu sarreysa ee codbixinta.
Intaa waxaa dheer, 40% jawaab bixiyaasha ayaa sheegay inay u badan tahay (30% aad bay u badan tahay; 10% waxay u badan tahay) inay heshiis la galaan hay'adaha Saudi Arabia/Sacudi Carabiya ee WTM London.
Boqortooyadu waxay sare u qaadaysay dhaqdhaqaaqeeda ganacsi sanadka 2021 ka dib xidhitaannada 2020.
Kahor sanadka 2019, fiisaha dalxiiska ee Sacuudi Carabiya waxaa inta badan lagu xaddiday safarrada ganacsiga, shaqaalaha ajaanibka ah iyo xujeyda booqanaya magaalooyinka Maka iyo Madiina.
Dalku waxa uu xudduudihiisa u furay dalxiisayaasha caalamiga ah iyada oo la bilaabay barnaamijkiisa e-visaha Sebtembar 2019.
Agoosto 1, 2021, Sacuudi Carabiya waxay soo dhaweysay dalxiisayaasha 18 bilood ka dib markii dalxiiskii la joojiyay masiibada Covid-19.
Waxa ay dejisay bartilmaameed hammi ah oo ah 100 milyan oo dalxiisayaal ah sannadka 2030, taas oo qayb ka ah dadaallada lagu doonayo in dhaqaalaheeda lagu kala beddelo ka baxsan shidaalka.
Sidoo kale in ay hoy u tahay Maka iyo Madiina, oo ah labada magaalo ee ugu barakeysan Islaamka, waddanku waxa uu horumarinayaa "mashruucyo waaweyn" si loo horumariyo dhaxalka boqortooyada, dhaqanka iyo hantida dabiiciga ah iyo sidoo kale jardiinooyinka mawduuca iyo goobaha raaxada ee raaxada.
Hawl-wadeennada sida Explore waxay hadda ku bixiyaan safarro gelbiyeedyo gudaha dalka iyo qaybteeda safarku sidoo kale way soo koraysaa - MSC Cruises iyo Emerald Cruises waxay qorsheynayaan inay ka shaqeeyaan marinnada ay ku jiraan Sacuudiga bilaha soo socda.
Magaalada AlUla ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa laga furay xarun ganacsi oo safar ah iyo goob tababar oo dhanka internetka ah si ay gacan uga geysato dhisidda wacyiga halka ay ku wajahan yihiin wakiilada socdaalka ee UK.
Fahd Hamidaddin, Madaxa Fulinta ee Hay'adda Dalxiiska Sucuudiga ayaa khubarada warshadaha dalxiiska kula hadlay ATM 2021 - dhacdada walaasha ee WTM London.
Waxa uu sheegay in Sucuudigu sanadka 2020-ka uu ku guulaystay ololihii dalxiiska gudaha, waxaana la filayaa in tirada dadka soo booqda ay kor u sii kacdo marka dib loo bilaabo socdaalkii caalamiga ahaa ee dhawaantan.
Sidoo kale horumarinta aqoonsigeeda dalxiiska, boqortooyadu waxay maalgalinaysaa dhacdooyinka ciyaaraha adduunka si kor loogu qaado sumcadeeda.
Sannadka 2019, waxa ay martigelisay Anthony Joshua ee la dagaalanka horyaalka miisaanka culus waxana ay qaban doontaa tartankeedii ugu horeeyay ee Grand Prix bisha soo socota (December 2021) ee magaalada Jeddah
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga WTM ee London, ayaa yidhi: "Waxay noqon doontaa mid aad u dhiirri-gelinaysa wafdiga Sucuudiga ee WTM London inay akhriyaan natiijooyinka wanaagsan ee macaamiishayada iyo doorashooyinka ganacsiga safarka. Labaduba waxay soo jeedinayaan in maalgelinta ballaaran ee dalxiisku ay durba bixineyso faa'iidooyin, heshiisyada lagu qaban doono WTM London waxay hubaal ka caawin doonaan meesha loo socdo si loo gaaro yoolalka hamiga ah."